Ardeyda Somalida ee ku dhaqan Khartum oo xustey munaasabadda 26-ka June(Sawiro) – SBC
Ardeyda Somalida ee ku dhaqan Khartum oo xustey munaasabadda 26-ka June(Sawiro)
Posted by editor on Juun 29, 2011 Comments
Khartoum:- Xaflad balaadhan oo lagu xusaayey maalinta 26 June, ayaa ka dhacday hoolka shirarka ee Jamacada Africa ee magaalada Khartoum.
Xafladan ayaa waxa soo qaban qaabiyey isla markaan soo bandhigay Labada Urur ee kala ah Ururka Ardayda Sanaag Sudan iyo ururka Ardayda Daraawiish,
Labadan urur ayaa soo bandhigay xaflad aad loogu bogay, taas oo u jeedadeedu aheyd sida uu noo sheegay xoog-hayaha guud ee Ururka Sanaag Maxamuud Maxamed Godone :
1- In la xuso malintii ay xoriyad la soo noqdeen shacabkii Soomaliyeed ee ku noolaa goboladd Waqooyiga soomaliya.
2- In La xuso malinta ugu horeysay oo calan Soomaliyeed laga taago Ciid Soomaliyeed
3- In la xuso dadaalkii ay sameeyeen halgamayaashii Somaliyeed iyo guushii ay ka soo hooyeen halgankoodii dheeraa ee ay la galeen cadowgii iyo guumaystihii Ingriiska.
Xafladdan oo ay ka soo qayb galeen masuuliin badan oo ay ka mid ahaayeen:- Qunsulka safarda Somaliya ee Sudan islam markaan ah sii hayaha xilka safiirka Mudane: Ibraahiim Axmed Guure, agaasimaha qaybta qorsheynta wasaarada isku Xidhka iyo qorsheynta Caalimiga ah mudane: Shafici Ismaaciil Maxamed iyo C/laahi Maxamed Diiriye oo katirsan xafiiska Raisal wasaaraha iyo xubno kale oo katirsan safaaradda Somalia, mudane Maxamuud Sugalle Gudoomiye shirkadda Kawaadiruun, Aqoonyahan, odayaal dhaqameed, iyo boqolaal kamid ah ardeyda wax kabarata Jamacadaha dalka Sudan, iyo dadkale oo fara badan.
Xafladan oo aheyd mid dadku aad u daneynayeen, ayaa wax si fiican u daadihinayey labad arday oo kal ah Dr, Cabdimajiid Sugulle iyo Siciid Xasan Guribar, ayaa waxa lagu bilaabay Aayat Quraan ah, kadib ayaa waxa xafladda ku daah furay Kelmad soo dhaweyn ah guddomiyaha ururka Ardayda Sanaag Mudane: Cali Xasan Cali (Ayaxle), kaas si fiican u sharaxya barnaamijyda xafladda iyo ujeedooyinka ay ka leeyihiin.
Kasoo qayb galayaashii xaflada ayaa halmar kuwad luqeeye una wada kacay Heesta calanka Soomaliyeed, taas oo xasuus iyo qiiro gelisat boqolaalkii kof ee ka soo qayb galay kulankan.
Injineer: C/risaaq Axmed Jaamac oo katirsan Ururka Daraawiish ayaa soo jediyey maqal taariikh ah oo kooban uu kaga hadlayey tariikhdii gobolda Waqooyi laga bilaabo 1805 markii ay yimaadeen ciidamo ka tirsan Masaarida xeebta magaalad Berbera, wuxuuna ka hadlay sidii loo gaadhay gobinimada iyo hogaamiyayaashii kacdoonadii kal duwanaa, sida Sayid Maxamed C/leh Xasan iyo ururadii SNL iyo USP.
Intaa kadib, waxa isdab raacay hadaladii iyo kalmadahii marti sharafta ka soo qayb galay xafladda
Garaad Maxamuud Suldaan C/salaam Suldaan Cali Shire oo goobjooge maalintii calanka laga taagayey magaladda hargeysa ayaa ka waramay sidii xafladii 26- June ee 1960 u dhacday, iyo gabayadii iyo heesihii la qaday malintaas.
Kelmada suldaanka oo aheyd mid si fiican loogu riyaaqay ayuu wax kalo kaga hadlay tariikhdii gumeystaha iyo wixii isbed ahaa ee dhacay gadaashiis, isla markaan waxa uu bulshadii ka soo qaybqadayt u soo jeediyey inay dib u fiiriyaan tariikhdaas oo ku daydaan sidii awoowayaashood u halgameen una fahansanaayeeyn wadaniyada iyo nolosha.
Intaa kadib, ayaa dadka si fiican u madadaaliyeey Gabyaaga dhalinta yar Dr. C/lah Axmed Dayib, wuxuuna meesha ka akhriyey gabayo fara badan oo ku saabsan xornima doonkii iyo wadaniyada iyo kuwo dhiiri gelinaya bulshadda.
Wax kaloo hadalo kookooban soo kala jeediyey Sucaad Siciid Nuur iyo maama Maryan, kuwaas oo kahadlay kaalinta Haweynka ku leeyihiin dhismah bulshad iyo nabdeynta.
Maxada ururka ardeyda somaliyeed C/risaaq Ilkacase, ayaa aamany sida ay u dhacday xafladani wuxunu sheegay in ay tahay maalin taariikh ah, wuxuuna u mahad celiyey labad urur ee soo qaban qaabiyey xaflada
Waxa kaloo xaflada kasoo qayb galay oo hadalo ka jeediyey macaliim Soomaliyeed ee wax kadhiga Jamacadaha Sudan, waxana u hadlay Prof. Xuseen Bashiir Sheikh, oo soo jediyey waa in aan la ilaabin shuhadadii iyo halgankoodii barakeysnaa.
Maamulayashii xaflada ayaa waxay soo badhigen sawiro iyo fillimo ay ku saabsan taarikhda halgankii somaliya iyo taariikhdii halgamayaashii somalida, waxan heeso kaqaaday xaflda fanaanka Ayuub
Gudoomiyaha jaliyadda somaliyeed Mudane Tarbi, ayaa ka hadlay muhiimda ay 26- June u leedahay umadda somaliyeed, aadna ula dhacay qabka loo soo abaaolay xafladan.
Gebagebadii iyo gunaanadkii xaflda ayaa Mudane ibraahim Axmed Guure , oo ah qunsulka safarda somaliyad ahna sii hayaha xilka safiirka usoo jeediyey ka soo qaybgalayaashiii xaflda hadal dheer oo uukag hadlayey muhiimda 26- June, iyo qiimah calnka somaliya, wuxuuna kahadlay
Qusulka ayaa tahniyad ka timi maxadtooyad somaliya soo gaadhsiyey umadii somaliyeed ee ka soo qayb gashay kulankan, wuxuuna soo jeediyey in somalidu u istaagan sidii ay u soo celin lahaayeen qiimihii iyo qaranimadii ay laheyd.
Xafladan ayaa aheyd mid aad u qiima badan, ayaa waxa iska kaashaday soo diyaarinteeda ururka Ardayda Sanaag iyo ururka ardayda Daraawiish, wuxuuna noo sheegay mudane Muuse Axmed Ciise oo ah gudidii soo qaban qaabisay in ay u dhacday si dii loo qorsheyey ayna gaadheen badi ujeedooyinkii xaflda ay ugu tala galeen.
Xogg-hayaha Gudida qaban qaabada C.qani Faarax Gacamay (prof-ka) uu ku tilmaamy xuskan inay aheyd mid taariikh ah islamarkaan taabaneyasa dhanka dhaqanka iyo Huwiyada umad degta gobolada waqooyinka somaliya ayna wax xidhiidh ah la laheyn siyaasada.
Inj: C/xakiim Aadam Xirsi Farole